Izindaba - Ikhwalithi ephezulu yezimbali zezinyosi, imfashini elula nemisebenzi ehlukahlukene!
I-Sunshade iyimfuneko yomndeni ngamunye. Isistimu enhle yokushiswa yilanga ngokuvamile ingasilethela injabulo engavamile. Ikhethini lezinyosi linjalo, lingasilethela isipiliyoni esingajwayelekile, ukukhetha kwethu okuhle kakhulu ekufiphiseni.
Ikhethini le-Honeycomb linezinhlobo ezimbili zokufiphaza ngokugcwele kanye ne-semi-shading, indwangu ephelele yokufiphaza engeyona eyelukiwe, ukusetshenziswa kocwecwe olujiyile lwe-aluminium, ukuqina okuhle, kungaba namandla ukuvimbela ukuhlasela kwemisebe eyingozi njengemisebe ye-ultraviolet. Indwangu ye-semi-shading ayinayo ucwecwe lwe-aluminium, isebenzisa izinto ezikhethekile, ayinayo impahla yendwangu, yonke ayinazo izinto eziyingozi, indawo iyaphathwa, i-antistatic ngasikhathi sinye futhi ayinawo uthuli, akulula isikhutha, isilinganiso se-shading ifike kuma-70%.
Ikhethini lezinyosi lisebenzisa izinhlangothi eziyisithupha zedizayini yezinyosi, engavimbela ukushisa okuphezulu futhi ihlukanise ukushisa. Ehlobo, ukushisa kwangaphandle akukwazi ukungena, futhi ebusika, ukushisa kwangaphakathi akukwazi ukuphuma. Gcina imfudumalo yasendlini ebusika futhi ipholile ehlobo. Isakhiwo se-honeycomb siyisakhiwo sesayensi kakhulu, hhayi nje kuphela ukuthi singafudumeza ukufudumeza, kepha futhi singanciphisa umsindo, sithuthukise induduzo ethule ngaphakathi, sivikele umsindo ongaphakathi ungavuzi!
Ikhethini lezinyosi ikhethini elithandwa kakhulu ngogesi elinomhlahlandlela wesitimela ongaguquki wohlaka lwensimbi. Ukuze senze amakhasimende aneliseke ngokwengeziwe, sithuthukise isitimela saso somhlahlandlela wensimbi saba ithrekhi ebanzi yezinto ezibonakalayo ze-aluminium alloy, ephathekayo. Isakhiwo esiklanywe ngokukhethekile senza siqine.
Ikhethini likagesi, umsebenzi oyinhloko usabonakala ekulawuleni okulula ngenhla! Ikhethini lethu lezinyosi lisebenzisa uhlelo oluyingqayizivele lokulawula, ukulahla okwendabuko kuye kokulawula okukodwa, irimothi, kungalawula izinjini eziyi-15, okungukuthi amakhethini ayi-15. Imoto ekhethekile iqukethe i-chip level yezempi eyakhelwe ngaphakathi kudivayisi eyisimungulu, inciphisa ngempumelelo ukudlidlizela nomsindo, ngomsebenzi wokuvikela othomathikhi, ohlonywe ngohlelo lokulawula ukubuyela emuva, ngokushiswa okuhle kokushisa, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, ukuqala okusheshayo, impilo ende.
Isikhathi Iposi: Sep-03-2021
Ikhadi Lezikhombisi Lomswakamo Lamachashaza Ayisithupha, Ikhadi Lesikhombi Somswakama Mahhala, ICobalt Mahhala, Ikhadi Lokukhomba Umswakama, Ukuhlola Umswakama Card, Ikhadi lamahhala leCobalt,